बलिउड Archives - Page5of 10 - www.kchhakhabar.com
दिपिका पादुकाेणकाे नदेखिएकाे ७ तस्विर
कैटरीना कैफ फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ मा एक्शन राेल गर्दै
फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ अली अब्बास जफरकाे डायरेक्सनमा बन्न लागेकाे फिल्म हाे । फिल्ममा अभिनेता सलमान खान र अभिनेत्री कैटरीना कैफकाे प्रमुख भूमिका रहेकाे छ ।
सन्नी लियोनको जिवनका यी २० रहस्य,जुन तपाईलाई थाहा छैन
वलिउड नायिका तथा पुर्व पोर्न स्टार सन्नी लियोन हालै ३४ वर्ष पुरा गरेकी छिन । एक पोर्न स्टार बाट उनले कसरी वलिउड सम्मको यात्रा गरिन् ? उनि पोर्न स्टार बन्नुको कारण के थियो ? उनी आफ्नो व्यक्तिगत जिवन कसरी बिताउछिन? उनि उनको व्यक्तिगत जिवनका रहस्यहरु के के रहेका छन? यि प्रश्नको उत्तर लिएर आज हामी तपाईसामु आएका छौ। जान्नुहोस उनको जिवन सम्बन्धि रोचक कुराहरु १ . बिग बोस ५ मा आउनु अघि उनलाई सिमित वर्ग...
‘रोचक प्रसंगः संजय श्रीदेवीको कोठामा छिरेपछि‘
बलिउड नायिका श्रीदेवीले अभिनय यात्रा सुरु गरेको ५० वर्ष पुरा भएको छ । सन् १९६४ मा ४ वर्षको उमेरमा तमिल चलचित्र ‘थुनइवन’ मा उनले पहिलो पटक काम गरेकी थिइन् । ५० वर्षे अभिनय यात्रामा उनको जीवनमा केही अविस्मणीय घटना भयो । जुन घटनालाई उनी कहिल्यै बिर्सन सक्दिनन् । सन् १९८३ मा जब चलचित्र ‘हिम्मतवाला’को सुटिङ हुँदै थियो । सञ्जय दत्त अचानक श्रीदेवीको रुममा पुगे र ढोका ढक्ढक्याउन थाले । जब उनले ढोका खोल...
सलमान खानलार्इ एक युवतीले नशाको सुरमा दिइन् एक झापड
लज्जित बनाउने बलिउडका ९ चर्चित झापडकाण्डहरु एजेन्सी/बलिउडका केही यस्ता सेलिब्रिटीहरु रहेका छन् जो चर्चामा आउनका लागि बेलाबेलामा आश्चर्यलाग्दा पब्लिसिटी गरिरहन्छन् । कोही भने आफ्नो रिस सम्हाल्न नसक्दा यस्ता हर्कतहरु गर्ने गर्छन् । कतिपय आफ्नो बयानका कारण चर्चामा आउँछन् र खुलेआम झापड हानेका दृश्यका कारण विवादमा आउने गरेका छन् । बलिउड सेलिब्रिटीका झापड काण्डहरु १.सलमान खान सन् २००९ मा दिल...
बिहे अगाडी विश्वासिलो मान्छे पाए गर्भ बोक्न तयार छु : श्रुति
एजेन्सी – चर्चित बलिउड नायिका श्रुति हासनले विवाह भन्दा अगाडि नै आमा बन्न कुनै समस्या नरहेको बताएकी छिन् । भारतीय मिडियाका अनुसार हसनले राम्रो केटा पाएँ भने विवाह अगाडि नै आमा बन्न मलाई कुनै समस्या छैन् भन्दै यसमा आपत्ती नरहने बताएकी छिन् । एक अन्तरवार्ता व्यक्तिगत जीबनका केही कुराहरु खुलासा गर्दै भनेकी छिन् म म्यूजिक डाईरेक्टर संग निकै क्लोज थिए मलाई लाग्थ्यो उनलाई निकै मन पराउँछु । तर, ब्रेकअ...
निर्मातासँग रात बिताएका यी ८ अभिनेत्रीहरु
बलिउडमा अभिनेत्रीहरुलाई ब्रेक पाउन र टिकिरहनको लागि धेरै नै सर्घष गर्नुपर्छ । सबै अभिनेत्रीहरुले बलिउडमा सफल हुन भन्दा पहिले धेरै नै कठिन यात्रा गर्नुपर्छ । धेरैले बाहिरबाट हेरेरै यो सोच्ने गर्छन् कि बलिउडको अभिनेत्रीहरुको जिन्दगी धेरै नै विलासी रहेको छ र उनीहरुले सामान्य जनताले जस्तो मुश्किलको सामना गर्नु पर्दैन होला । तर, तपाई हाम्रो यस्तो सोच गलत हुन सक्छ किनभने यी सबै अभिनेता अभिनेत्रीहरुला...
नाङ्गै सुत्न मनपराउने बलिउड अभिनेत्रीहरु
एजेन्सी, बलिउडमा बिभिन्न गसिपहरु बाहिर आईरहन्छन् । बलिउड कलाकारको उठ्ने बस्ने खाने देखि उनिहरुले लगाउने भित्री कपडा समेत समाचारको लागि राम्रै मसला बनिरहेको हुन्छ ।यस्तै एक मसला छ बलिउडका कुन कलाकार के लगाएर सुत्छन् भन्ने । आम मानिसले सोचे भन्दा फरक उनीहरु नाङ्गै सुत्ने गरेका छन् । हेर्नुहोस् को को सुत्छन् त नाङ् १. ज्याकलिन फर्नान्डेज ज्याकलिन फर्नान्डेज नाङ्गै स...
फिल्म निर्देशकलार्इ नायिका साम्राज्ञीको आश
नायिका शिल्पा पोख्रेल चलचित्रमा हुँदा हुँदै निर्माता छविराज ओझाले नायिका साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाहलाई ‘मंगलम’ नामक चलचित्रमा भित्राए । चलचित्रमा उनको भूमिका कस्तो छ भन्ने खुलाइएको छैन । तर, साम्राज्ञीको बढ्दो लोकप्रियतालाई देखेर नै छविले यसो गरेका हुन् भन्ने वुझ्न गाह्रो पर्दैन । तर, नायिका साम्राज्ञी भने छविराज ओझाको निर्माणमा तयार भएको चलचित्र ‘मंगलम’लाई आफ्नो सूचीमा नै राख्दिनन् । उनले निर...
मनिषालाई शाहरुखको सुझाव, जस्तो पायो त्यस्तो फिल्म नखेल्नु!
मनिषा कोइरालाले बलिउड सुपरस्टार शाहरुख खानसँगै धेरै फिल्म खेलेकी छैनन्। तर, शाहरुखसँग उनको ट्युनिङ गज्जबको मानिन्छ। मनिषाले मणिरत्नमको ‘दिल से’ मा बलिउडका किङ खानसँग अभिनय गरेकी थिइन्। मनिषाका अनुसार त्यो एउटै फिल्मबाट उनको शाहरुखसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित भएको थियो। शाहरुखले उनलाई जस्तो पायो त्यस्तो फिल्म नखेल्न सुझाव दिने गरेको उनले खुलासा गरेकी छिन्। ‘शाहरुखले मलाई राम्रो सल्लाह दिने गर्थे।...